ए प्लस सहित नवोदयको सतप्रतिशत नतिजा - Baikalpikkhabar
ए प्लस सहित नवोदयको सतप्रतिशत नतिजा
कमल गाँउपालीका २ समयगढ स्थित नवोदय माध्यमीक विद्यालयले गत बर्ष लिइएको एसइइ परिक्षामा ३ जना ए प्लरस सहित सतप्रतिश नपतजा ल्याउन सफल भएको छ । विद्यालयबाट सामेल भएका ! ८ विद्यार्थीहरु मध्ये ३ जना ए प्लस , ७ जना ए , ७ जना वि प्लस र ! जना वि सहित सबैजना विद्यार्थी सफल भएको विद्यालयका प्रिन्सिपल रामहरी घिमिरेले जानकारी दिएका छन । प्राप्त नतिजा स्वभाविक भएको प्रतिक्रीया दिंदै घिमीरेले सफल सम्प’र्ण विद्यार्थीलाइ बधाइ तथा उज्वल शैक्षिक सफलताको सुभकामना दिएका छन । यो सफलता प्राप्तगर्न सहयोग पुर्याउने अभिभाबक , विद्यालय परिवार , सुभचिन्तक सबैमा धन्यवाद ब्यक्त गर्दै घिमिरेले आगामी दिनह?मा अझै मेहेनत गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन ।
सोमबार, १६ असार, २०७६, दिउँसोको ०२:४७ बजे